Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland oo ka hadlay xiisadda dagaal ee gobolka Sanaag – Kalfadhi
Teer iyo toddobaadkii hore xiisad dagaal ayaa ka aloosan deeganada Yubbe iyo Hadaaftimo ee gobolka Sanaag, halkaas oo oo ay ciidamo hor leh soo gelisay Soomaaliland. Xiisadaas ayaa dhalisay abaabul iska caabin ah oo ay Puntland beryahan ka waday gobolka Sanaag.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqaas, wuxuuna ku tilmaamay daandaansi iyo arrin aan sax ahayn. Dhoobo ayaa u jeediyay Soomaaliland in ay ka waantoobaan mushkiladda gobolka.
“Waxaan u aragnaa arrin aan loo baahnayn dhibaato hadeer la galo iyo dagaal iyo rabash” Ayuu yiri Dhoobo-daareed.
Gudoomiyaha ayaa laga soo doortaa deegaanada ay xiisadu ka jirto. Wuxuu sheegay in ay Puntland ku khasbantahay in ay difaacato deeganadeeda dastuuriga ah.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland ayaa weli ku maqan safar uu ku joogo Muqdisho iyadoo toddobaadkanna la filayo inuu dib u furmo fadhiga goluhu.
Xildhibaan Xidig: Dowladda Federaalka ma faragelin doonto Doorashada Jubbaland